Delta Chat - အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောမေးလ်အခြေပြုစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်း | Linux မှ
ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းပညာဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဤသည်နေ့ရက်ကာလ၌, အထူးသဖြင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ ကွန်ပျူတာလုံခြုံရေး၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်အမည်ဝှက်ခြင်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် / သို့မဟုတ်စာတိုပေးပို့ခြင်းဆိုင်ရာ application များ၏အားနည်းချက်များသို့မဟုတ်အားနည်းချက်များအကြောင်းသတင်းအတွက်၊ WhatsApp ကိုခေါ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေါ်လာတယ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat.
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကြောင့် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat သစ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် စာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာအခြားလူကြိုက်များတဲ့မတူတာက သင်၏အီးမေးလ်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ပါဖြစ်နိုင်ရင်၊ စာဝှက်တယ် အလိုအလျောက်စာဝှက်စနစ်။ အခြားအရာများအကြား၊ ၎င်း၏အသုံးပြုသူများကိုမှတ်ပုံတင်ရန်မလိုအပ်ပါ ရှိပြီးသားအီးမေးလ်အကောင့်တစ်ခုဖြင့်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ကျနော်တို့မကြာသေးမီကအခြားစိတ်ဝင်စားဖို့အကြောင်းကိုတင်ခဲ့သည် စာတိုပေးပို့ရေးလျှောက်လွှာတစ် ဦး ကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ကွေးနနျးစာ o WhatsApp ကိုကိုခေါ် session။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအချက်များနှင့်ကွဲပြားမှုမှာ -
"session အများသုံးသော့ကိုအခြေခံသည့်လုံခြုံသောစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ဗဟိုမှလွှဲပြောင်းထားသောသိုလှောင်မှုဆာဗာများနှင့်သုံးစွဲသူ metadata များ၏အနည်းဆုံးထိတွေ့မှုနှင့်အတူအဆုံးမှအဆုံးစာဝှက်ထားသောမက်ဆေ့ခ်ျများပို့ရန်ကြက်သွန်နီလမ်းကြောင်း protocol ကိုအသုံးပြုသည်။ ပင်မစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းများ၏ဘုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုထောက်ပံ့ပေးနေစဉ်၎င်းကိုပြုလုပ်သည်".
မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chatထို့အပြင်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိသောလက္ခဏာများလည်းရှိသည် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုတစ်နည်းအားဖြင့်၎င်းသည်အကြီးဆုံး၊ ကွဲပြားခြားနားဆုံးနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသည့်ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကိုအသုံးပြုထားပြီးလက်ရှိအီးမေးလ်ဆာဗာများဖြစ်သည်။
1 မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat
1.1 သော့ချက် features တွေ
1.2 GNU / Linux တွင်တပ်ဆင်ခြင်း
၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်။
Delta Chat သည်ချက်ချင်းချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်ပြီးစက်များအကြားထပ်တူပြုသည်။
၎င်းသည် cross-platform application တစ်ခုဖြစ်သည် (Windows, MacOS, Linux, Android နှင့် iOS) ။
အသုံးပြုသူ၏အီးမေးလ်အကောင့်နှင့်ပံ့ပိုးသူကို အသုံးပြု၍ အီးမေးလ်များကိုပို့သည်။
အသုံးပြုသူများအချင်းချင်းဆက်သွယ်မှုစတင်သောအခါအဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption ကိုအလိုအလျောက်သတ်မှတ်ပေးသည်။
မှတ်ချက်ဖြေ - စာဝှက်စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး၊ အဆုံးမှအဆုံးသို့ encryption applications များအကြားအလုပ်ဖြစ်တယ်သာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat, ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်လျှင်အခြားအီးမေးလ် application များနှင့်လည်း Autocrypt အဆင့် 1 encryption ကိုစံ.
ငါတို့အကြောင်း GNU / Linux လည်ပတ်ရေးစနစ်များ, မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat တပ်ဆင်ဖိုင်များ format နဲ့ထောက်ပံ့ပေးသည် deb y AppImageခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70 ကို MB y 107 ကို MB အသီးသီးလက်ရှိဆံ့သော တည်ငြိမ်သောဗားရှင်း 1.0.0မကြာသေးမီကပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလကထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်၎င်းတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Flatpak နှင့် repositories ၌တည်၏ AUR အတွက် Arch Linux ကို။ ၎င်းကိုတပ်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဖြန့်ဝေမှုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်စေသည်။
မသန်စွမ်း အန်းဒရွိုက်, မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Chat, မှာရရှိနိုင်ပါပြီ ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းနှင့်အရွယ်အစားအသုံးပြုသည့် operating system အမျိုးအစားနှင့်ဗားရှင်းအရသိရသည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတစ်ရှိပါတယ် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် အလွန်ပြည့်စုံရိုးရှင်းနှင့်စပိန်အတွက်။ ၎င်းတွင်တန်ဖိုးရှိသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ Download, Blog, Support, မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများနှင့်ဖိုရမ်။ အားလုံးအထက်, သူ့ မကြာခဏမေးလေ့ရှိတဲ့မေးခွန်းများအပိုင်း ၎င်းတွင်လျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်သောသက်ဆိုင်ရာနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းအချက်အလက်များစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု၊ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များကိုနက်နက်နဲနဲနားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Delta Chat»စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းပြီးအခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောစာတိုပေးပို့ရေး application တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခြားလူကြိုက်များမှုများအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်ရန်စဉ်းစားသင့်သောအင်္ဂါရပ်များရှိသည် ကြေးနန်းသို့မဟုတ် WhatsApp, ၎င်းသည်ခြေရာခံခြင်းကိုရှောင်ရှားပြီးဗဟိုထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားပါသည် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Delta Chat - အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအီးမေးလ်အခြေပြုစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ်
RLBox သည် Mozilla အသုံးပြုသောစာကြည့်တိုက်သီးသန့်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်သည်
သင်၏ Paypal ရန်ပုံငွေဖြင့် Google Pay နှင့်ငွေပေးချေလျှင်သတိထားပါ